Shirarka jaaliyadaha Ogadeenya oo isu badalay golaha shimbirayahow heesa
Ali Yusuf | UK | Email. Aliyusuf70@hotmail.com
Dabayaaqadii 80da iyo bilowgii 90ka oo ah wakhtiga ay qaxootiga Somalidu ku soo bateen qurbaha, waxaa meelo badan oo dunida ka biloowday isxilqaan iyo dadaal ay doonayeen wax garadka u nasab sheegta dalkaas in ay kaga qayb qaataan wacyigalinta iyo horumarka ummadooda. waxaa hubaal ah in badan oo ka mid ah waxgaradkii safka hore kaga jiray abaabulkan ay ku hungoobeen dadaalkoodii, oo ay maanta il murugu leh ku eegayaan majara habaabinta ashkhaas dan gaar ah leh ay ku sameeyeen ujeedadii aasaasiga u ahayd abaabulka jaaliyadaha Ogadeenya ee dibadda, oo maanta isu bedelay golo ay isu marxabeeyaan in yar oo isku fikarad ah, oo isla yaqaana heesaha goobta. waa gaddii shimbirayahow heesa oo hees wanaagsan heesa!.
Jaaliyadihii u horeeyey waxay ka hana qaadeen dalalka ay ka mid yihiin UK, Germany, Denmark, Sweden, Norway, Holland, Australia, iyo gobolo ka mih ah Waqooyiga Amerika . Qaabka samynta (structure ), ujeedooyinka iyo aragtida jaaliyadahan oo kala duwanaa aawgeed ayaa waxaa bilowgii 1990kii aad la isugu hawlay in la sameeyo wada shaqayn iyo ujeedo midaysan, lagana faaidaysto kala duwanaanta fikirka, isla markaana ay jaalyaduhu noqdaan golo mideeya bulshada Ogadeenya.
Ujeedooyinka ay ka midaysanaayeen dadkii hormoodka ka ahaa jaaliyadaha dibadda ee xilligaas, waxaa ugu muhimsanaa in gacan laga gaysto horumarrinta nolol maalmeedka ummadda, sida waxbarashada, caafimaadka, daryeelka bayadda, xuquuqda aadamaha, oo intuba runtii ku sugan xilli uu oday adeerkay ah horay ugu tilmaamay “ Ogaadeenya waa meesha qudha ee uu bidhaan garan lahaa, haddii nabi Adan ifka ku soo noqon lahaa! ”, iyo waliba in ay jaaliyaduhu ay noqdaan ambasadooro aduun waynaha u gudbiya xaaladda ay ummadaas ku suguntahay, taas oo ka daboolan dunida inteeda badan.
Waxaa xusid mudan shirkii ka dhacay Stockholm 1994, oo ahayd meeshii lagu ansixiyey in ay jaaliyadaha Ogaadeenya sanadkiiba mar shir isugu yimaadaan, si loo xoojiyo wada shaqaynta, loo xisaabtamo, loona curiyo fikir cusub. Shirarka noocaas ah oo si daba joog ah u dhici jiray kama aanay madhnayn khilaaf, fikrado iska horjeeda iyo waliba ururada siyaasiga ah sida Onlf oo iyagu mar walba watay aganda gaar u ah, oo ay ku caburinayaan ciddii wadata fikrad tooda ka duwan.
Waxaa abuurmay jaalyado hor umar la taaban karo sameeyey, oo xafiisyo ka furay dalal badan oo dibadda ah, Taasoo ay runtii gacan ka gaysatay maamulkii jabhadda ONLF ee xiligaas.
Waxaa biloowday kacdoon guud oo ka madax bannaan ururada siyaasiga sida Onlf iyo ururadii diiniga ahaa. Waxaa xusid muadan samayntii ururka xuquuqul insaanka ee Ogaden human rights committee, taakulayntii caafimaadka ee ay geesteen jaaliyadaha Australia iyo Germany , samayntii machadka cimlmi baadhista ee Virginia “Ogaden studies institute”, doodii xaalada Ogadeenya ee ka dhacday baarlamanka Sweden, joojintii kaalmada dhaqaalaha ee Denmark ay siin jirtay Ethiopia iyo tallaabooyin kale oo wax ku ool ah, oo ummadda codkeeda gaarsiiyey golayaal ay ka mid yihiin EU.
Jaaliyaduhu waxay ahaayeen goobta ay isku hardiyaan , kuna loolamaan fikradaha xorta ah ee ummaddaSomali galbeed . Waxaa runtii xusid mudan shirkii 1997 ee London, oo dooda ugu ballaaran ay ahayd in la isku dayo xabbad joojin iyo waan waan siyaasadeed oo Ethiopia lala galo, arrintaas oo ay hormood ka ahaayeen ashkhaas hadda ka mid ah ONLF, iyada oo ay xilligaas qaar ka mid ah ka qaybgalayaasha shirka Stockholm ay masuuliyiin sare ka haaayeen maamulka Ethiopia . Fikirkaas waxaa aad uga soo horjeeday oo qaadacay shirka qaar kale oo iyana ka mid raga ka hadlaya shirak Stockholm anno 2003 !! waxay ahayd dood caafimaad qabta oo ay jaaliyaduhu ku bislaadeen, dadkuna isku bartay , qof walbana uu xor u ahaa mawqifkiisa.
Isu marxanbaynta golaha shimirayahow heesa waxaad ka milicsan kartaa marka aad eegto dadka ka hadlayey shirkan, oo haba yaraatee intooda badan wax ay ku soo kordhinayaan aanay jirin halganka iyo hor umarinta ummadda midnaba, waa nasiib darro ummadeena haaysata.
Suaashu hadaba waxay tahay xagay wax iska qaban la´yihiin, oo maxaa sabab u ah dib u dhaca iyo horumar laáanta jaaliyadaha Ogadeenya ? caqabada ugu wayn ee hortaagan in jaaliyadaha Ogadeenya ay hor sameeyaan waa jabhadda Onlf , oo wakhtigooda inta badan u isticmaala propogaando, caburinta fikradahooda kuwa ka duwan oo ciddii allaale ciddii tiraahda war sidani si ma aha lala tiigsado shabad ay ku qorantahay xabshi ayuu u shaqeeyaa. iyo in la adeegsado inta aan taariikhda ummadda waxba kala socon. Waayo waayahan dambe waxaa qurbaha soo galay dad badan oo aan la socon marxaladaha ay jaaliyaduhu soo mareen.
Shirarkii Jaaliyadahuna waxay isu bedeleen unugyada Onlf. Waxay si toos ah u bilaabeen olole ay ku burburinayaan, kulana wareegayaan jaaliaydihii jiray, taas oo ay ugu dambaysay jaaliyadda London.
Shirkan Stockholm waxaa lagu tilmaami karaa shir looga dan leeyahay dacaayad, oo haba yaraatee wax nuxur ah aan lahayn , waayo shirkani wuxuu ahaa shir ay isugu yimaadeen unugyada Jabhadda Onlf oo haba yaraatee wax shaqa kuma uusan lahayn horumarinta ummadda.
Suaashu waa ilaa iyo intee baa laga aamusnaan karaa dabandaabyada ay uammada ku hayaan gumaysi macangag ah , jabahd jiha wareersan iyo dawlad goboleed Jigjiga joogta oo iyaga uun iska daba lusha ?
» MAQAALADII KALE EE TODDOBADKAN KA AKHRI HALKAN. GUJI
Afeef: Aragtida qoraalkan waxaa leh oo ay gaar u tahay qoraaga ku saxiixan.